Ifenisha Yezilwane Ezifuywayo
Ake ngikuse efekthri yethu yezihlalo ezigobayo ozovakasha
Imininingwane Namuhla, ake ngikuyise ekuvakasheleni imboni ekhiqizayo yesitulo sethu esinyakazayo. Kubandakanya ingxenye yokukhetha izinkuni, ingxenye yohlaka, ingxenye yombala kapende, nokukhiqizwa kwengxenye yesembozo sesihlalo esiphezulu, isipontshi siphinde sisetshenziswe njenge ...
Umsebenzi wokufunda we-IKEA onenjongo kakhulu
Isimo sasekhaya esinethezekile nesifudumele I-IKEA inikeza izinhlobonhlobo zezinto zasendlini ezinhle nezisebenzayo abantu abavamile abangazikhokhela. Isitayela sekamelo lesimodeli esidala sihambisana nobuhle kanye nezidingo zabantu abasha. Lesi yi-wort ...
Kuyivelu yethu ukuhlinzeka ngemikhiqizo yasendlini yekhwalithi ephezulu neshibhile emphakathini.
Kungumqondo wethu wokubaluleka ukunikeza umphakathi inhlobonhlobo yemikhiqizo yefenisha emihle nesebenzayo. I-Yamason Furniture Furniture Co., Ltd. izophuma ngivakashele futhi ngifunde njalo ngenyanga, kulokhu ngaya e-IKEA. I-IKEA ingafingqwa ngamagama ambalwa kuwo wonke umuntu...
Thatha nawe uvakashele inkampani yefenisha ye-IKEA
Izolo, inkampani ihlele ukuvakashela inkampani yefenisha yomhlaba wonke i-IKEA. Okokuqala, ngokwendawo yendawo, kusukela kuthelawayeka ongaphansi kwe-viaduct, ngakwesokudla, sabona isakhiwo sefekthri yayo. Imibala ehlukene ephuzi neluhlaza okwesibhakabhaka inzima ...
Inkampani yethu ivakashele i-IKEA ukuze ifunde ukwakheka kwefenisha yabo kanye nomentshisi ngoMgqibelo odlule
Sawubona, uNiki lo! Uhamba kanjani namuhla? Inkampani yethu ivakashele i-IKEA ngoMgqibelo odlule zingama-23 kuMfumfu 2021. Isimo sayo sikhululekile kakhulu. Ake ngikubonise ukuvakasha kwethu kusuka ngaphandle kwe-IKEA. Ukusuka lapha, sangena ku-IKEA. Kunabantu abaningi abavakashela i-IKEA ngesikhathi esifanayo. F...
Igumbi lokubukisa ifenisha kanye nokucubungula ishabhu lomkhiqizo wefenisha yaseYamasen
Namuhla siye embukisweni wefenisha esanda kwakhiwa futhi sanikeza isingeniso esifushane sefenisha yethu entsha. Ifenisha yokhuni eqinile yesitayela seNordic isha futhi inhle ngesitayela, noma ngabe itafula lokudlela, umbhede, isitulo sebha, itafula lekhofi, ikhabethe lewayini eligoqwayo, ...
Ukuthuthukiswa komkhiqizo omusha-Isihlalo sokudlela
I-Dining Chair I-backrest iklanywe ngendlela ehlelekile futhi inethezekile ukuncika kuyo, ikhulula ukucindezela okhalweni. Umcamelo wesitulo wenziwe ngelineni, elikhululekile futhi eliphefumulayo, linokuqina okuhle, futhi alikhathali ngemva kokuhlala...
Ikhabethe lezicathulo zangokwezifiso ezintsha
Ikhabhinethi yezicathulo Le #ikhabethe lezicathulo emnyango ingaphezu nje kwekhabethe lezicathulo. Ingasetshenziswa futhi njengeshalofu, futhi ungakwazi ukubeka izinto zakho siqu, ezifana nomakhalekhukhwini, njengezihluthulelo emva kokungena emnyango. Ngaphezu kwalokho, le khabhinethi yezicathulo nayo iza...
5 Imikhiqizo Emisha-IKhabhinethi Yesitendi ye-TV
IKhabhinethi Yezitezi ze-TV Namuhla ngizokuyisa ukuthi ubone imikhiqizo yethu emi-5 emisha-amakhabethe e-TV, wonke enziwe nge-MDF, alula kakhulu futhi afaneleka, futhi kulula ukuwafaka. Isithombe esilandelayo sibonisa imikhiqizo yethu emisha emi-5 ...
I-surfboard yethu entsha iku-inthanethi muva nje! Wonke umuntu wamukelekile ukuthenga! Sonke siyazi ukuthi ukuntweza kuwumdlalo ohlanganisa izicubu zomzimba wonke. Igcwele ijubane nothando. Ukusefa kunezinzuzo eziningi, phumuza umoya, xhumanisa ukucindezeleka, ukuzivocavoca umzimba, ujabulele umzimba futhi...
Umbhede wokuncoma womkhiqizo omusha
Muva nje, imboni yethu yethule imikhiqizo emisha, ikakhulukazi ama-tatami esitayela saseJapan. Le mibhede yakhiwe ngamalokha. Ngaphezu kwalokho, zingabuye zihambisane nama-pedals, amadeski, ama-bookcases, ama-wardrobes, njalonjalo. Hlobo luni lwenhlanganisela ongayifanisa, uma...
Ukuthatha uvakashele inqubo yokwenza usofa efektri yethu
/uploads/1.mp4 Umkhiqizo esizokhuluma ngawo namuhla usofa. I-sofa ingumkhiqizo wefenisha obalulekile empilweni yethu. Busebenza kanjani ubuciko bakhe? Uyafuna ukwazi ubuciko...
Ake ngikuse esihlalweni sethu esigobayo...
Kuyivelu yethu ukuhlinzeka ngekhwalithi ephezulu...